वेल डन नेपाल ! | कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक
वेल डन नेपाल !
मिति: Wednesday,12th September 2012 22:58 PM
मलेसियामा नेपालले अमेरिकालाई हराएर आईसीसी डिभिजन लिग ४ बाट ३ मा उक्लेलगत्तै इटालीमा रहेका रामचन्द्र थापा, डेनमार्कका शिव बोगटी र फिनल्यान्डका निराजन थापाले एकैचोटि खुसी मनाए । फाइनलसम्मका ६ वटा खेल जितेर इतिहास रचेको नेपालको प्रदर्शनबाट विश्वभर रहेका क्रिकेट पारखीले सामाजिक सञ्जालमा खुशी व्यक्त गरिरहँदा क्रिकेटसँग कुनै साइनो नै नभएको साहित्यका हस्ती राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले पनि लैनचौरस्थित आफ्नै निवासमा ‘क्रिकेटले नेपालको नाम राख्यो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिन भ्याए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ‘टिनएजर’ नेपाली टोलीले मलेसियाको प्रदर्शनपछि सुनौलो सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । १६ वर्षअघि मलेसियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल सुरु गरेको नेपालले मलेसियामै ऐतिहासिक सफलता पाएको हो । डिभिजन लिग ४ मा अपराजित यात्रा पार गर्दै फाइनल आफ्नो पोल्टामा पारेपछि क्रिकेट पारखीमात्रै हरेक नेपाली गर्वले फुले । उपाधि चुमेर स्वदेश फर्केको टोलीले मंगलबार भव्य स्वागत पनि पायो । सरकार, राजनीतिक दललगायत विभिन्न संघसंस्थाको बधाई पाउने क्रम चलिरहेको छ ।
आर्थिक र पूर्वाधार अभावले सधैं समस्यामा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले लिग जितेको मात्र होइन, सन् २०१५ मा हुने विश्वकप छनोटको सम्भावनालाई झन् बलियो बनाएको छ । नेपालले अब डिभिजन ३ र २ खेल्दै विश्वकप छनोटको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले अब पपुवान्युगिनी, हङकङ, ओमान, इटाली र नेपालसँगै उक्लेको अमेरिकासँग २०१३ अप्रिलमा बर्मुडामा हुने डिभिजन ३ प्रतियोगिता खेल्नेछ । नेपालले यो खुड्किलो पार ग¥यो भने २०१४ को विश्वकप छनोट खेल्न पाउनेछ । छनोटमा पनि शीर्ष दुईमा रह्यो भने नेपालले २०१५ को विश्वकप खेल्न पाउनेछ ।
सोमबार अमेरिकालाई ८ विकेटले पराजित गरेपछि नेपाल क्रिकेटमा चम्केको हो । त्यसअघि नेपालले डेनमार्क, सिंगापुर, तान्जानिया, मलेसियालाई पराजित गरेको थियो । डेनमार्कलाई डकवर्थ लुविस नियमका आधारमा २५ रनले हराएको थियो भने सिंगापुरलाई ५, तान्जानियालाई ८ र मलेसियालाई १० विकेट र अमेरिकालाई ३२ रनले पछाडि पा¥यो । फाइनलमा पुनः अमेरिकालाई ८ विकेटले हराएर नेपालले उपाधि चुमेको हो ।
डिभिजन ४ लिगमा शक्ति गौचन, अनिल मण्डल, सुवास खकुरेल र बसन्त रेग्मीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विभिन्न कीर्तिमानसहित चम्के । शक्तिले मलेसियाविरुद्धको खेलमा विरलै हुने किफायती बलिङ गरे । उनले १० ओभर बलिङ गर्दै ८ मेडनसहित २ रनमात्र खर्चेर ३ विकेट लिए । त्यस्तै, अमेरिकाविरुद्धको खेलमा सुवासले शतक बनाउँदै वान डेमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी बने । उनले १ सय १५ रन बनाएका थिए । शतक पूरा गर्दा उनले एउटा छक्का र आठ वटा चौका हानेका थिए ।
अनिलले पनि डेनमार्कविरुद्ध शतक पूरा गरे । उनी शतक पूरा गर्ने पाँचौं नेपाली हुन् । उनले १ सय १३ रन बटुलेका थिए । त्यस्तै, बसन्त रेग्मी एउटै प्रतियोगितामा २१ विकेट लिएर ‘प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट’ भए ।
क्रिकेटका तीन पक्ष– ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङमा विगतभन्दा राम्रो देखाएको नेपालले ब्याटिङमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने खेलाडी तथा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) पदाधिकारी बताउँछन् । लिग जितेपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक पृबुदु दसानायकेले नेपाली टिम विश्वकप खेल्न सामथ्र्य राख्ने टिम भएकाले आगामी दिनमा योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । “प्रतिभावान खेलाडीले केही गरेर देखाउन सक्छन्, यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ,” उनले भने ।
क्यान अध्यक्ष टंक आङबुहाङले डिभिजन ४ को सफलता ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै क्रिकेटमा मात्र नभई खेल जगत्मै नयाँ आयाम भएको प्रतिक्रिया दिए । “ब्याटिङमा अझै ध्यान दिने हो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ,” उनले भने ।
नेपालको खेलकुद क्षेत्र प्राविधिक, भौतिक र आर्थिक रूपमा सधैं खुम्चिँदै आएको छ । क्रिकेट पनि त्यसबाट अछुतो छैन । वार्षिक करिब ९ करोड बजेट रहेको क्रिकेटलाई अझ सुधार गर्न थोरैमा पनि १ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने अध्यक्ष आङबुहाङ बताउँछन् । “१ अर्बले राष्ट्रिय क्रिकेटलाई मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “देशभरका गतिविधि, मैदान, खेलाडीको तलबभत्ता, खेल सामग्रीलगायतको कुरा गर्ने हो भने त २ अर्ब बजेट हुनुपर्छ, अनि मात्र देशको क्रिकेटको स्तर उक्लिन्छ ।”
पर्याप्त बजेट नभएकै कारण राष्ट्रिय खेलाडीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । “हामी समस्यै समस्याका बीचमा खेलिरहेका छौं,” कप्तान पारस खड्का भन्छन्, “पहिलेभन्दा केही सुध्रिएको छ तर समयअनुसार नहँुदा खेलाडी आर्थिक रूपमा मात्र नभई भौतिक पूर्वाधारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरैले विश्वकपको आशा राखेका छन् । विश्वकप एकैचोटि प्रवेश गर्ने प्रक्रिया होइन, हामी स्टेप–स्टेप गरेर जानुपर्छ, यसमा धेरै चुनौती छ ।”
अहिले पाउँदै आएको मासिक ५ हजार एकछेउ पनि नहुने उनी बताउँछन् । “खासमा हामीले पैसाको लागि खेलेका होइनौं तर पनि सरकारले यसका लागि सोच्नुपर्छ,” भन्छन्, “अनि बल्ल हामी व्यावसायिक बन्नेछौं ।”
लिग जितेर नेपाल फिरेको टोलीलाई क्यानले जनही ३० हजार नगदले पुरस्कृत गर्ने भएको छ । यो पुरस्कारले आर्थिक हौसला प्रदान गर्ने भए पनि सरकारले थपथाप गर्नुपर्ने अध्यक्ष आङबुहाङको भनाइ छ । “हामीले धेरै दिन सकेका छैनौं, सरकार र निजी क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने अझ हौसला बढ्छ,” उनले भने ।
अहिले क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पेप्सी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले क्यानलाई १२–१२ लाख रुपैयाँ प्रायोजन गरेका छन् । क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले क्यान र खेलाडीलाई सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताउँछन् । “हामीसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा खेलाडीलाई आकर्षक तलबभत्ता दिन सकिएको छैन,” उनी भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधार छैन, तालिम राम्रोसँग दिन सकिएको छैन । क्रिकेट आफैंमा महँगो खेल हो तर पैसा छैन ।”
उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल नेपालमा अझै खेलेर बाँच्नसक्ने अवस्था नरहेको देख्छन् । त्यसैले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न उनी सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्छन् । “क्रिकेटमा मात्र लाग्ने हो भने बाँच्न गाह्रो छ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे, “गाह्रो भयो भने राम्रा खेलाडी पलायन हुन सक्छन् ।”
नेपालले विश्वकप खेल्ने सपना साँचेको अहिलेदेखि होइन । यसअघि दुई पटक विश्वकप यात्रामा निस्किए पनि नेपाल कहिल्यै छनोट खेल्न पाएन । पहिलोपटक सन् २००८ मा जर्सीमा भएको आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन ५ अफगानिस्तानसँग पराजित भएपछि नेपाल अघि बढ्न सकेको थिएन । सन् २०१० मा काठमाडौंमा पुनः डिभिजन ५ खेलेर अमेरिकासँग डिभिजन ४ मा उक्ले पनि इटालीमा तान्जिानियासँग लिग चरण पराजित भएपछि सपना तुहिएको हो ।
नेपालले यूएईमा एक महिनापछि एसीसी एलाइट कप खेल्नेछ, जहाँ डिभिजन थ्री र त्यसमाथिका देश पनि रहनेछन् । यसबाट थुप्रै अनुभव बटुलेर त्यसलाई आगामी यात्रामा प्रयोग गर्ने दाउमा नेपाल छ ।